दुई वर्ष अगाडि बे’पत्ता भएकी महिला समुद्रको बिचमा जीवितै भेटिइन्, यसरी गरियो उ’द्दार (भिडियो हेर्नुस्) – Sanchar Patrika
दुई वर्ष अगाडि बे’पत्ता भएकी महिला समुद्रको बिचमा जीवितै भेटिइन्, यसरी गरियो उ’द्दार (भिडियो हेर्नुस्)
October 3, 2020 180
काठमाडौ । दुई वर्ष अघि घरबाट बेप’त्ता भएकी एक महिला समुन्द्रको बिचमा जि’वितै फेला परेकी छन् । उनलाई जि’वितै उ’द्दार गरिएको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । कोलम्बियाको यो भिडियोले संसारलाई चकित बनाएको छ । हराएको दुई वर्ष पछि समुन्द्रको बिचमा जि’वितै फेला परेको घ’टनाले अहिले विश्वमा चर्चा भएको छ । उनलाई उ’द्दार गरेको भिडियो पनि भाइरल भएको छ ।
शनिबार एन्जेलिका जाइतन नाम गरेकी महिला समुद्रमा तैरिरहेको अवस्थामा भेटिएको द सनले जनाएको छ। ४६ वर्षकी एन्जेलिकालाई स्थानीय माझी रोलान्डो भिसबल र उनका साथीले भेट्टाएको बताइएको छ। उनीहरुले समुन्द्रमा तैरिरहेको अवस्थामा देखेका थिए । प्युर्टो कोलम्बियाको किनारदेखि दुई किलोमिटर टाढा समुद्रको बीचमा एन्जेलिकालाई देखेपछि माझीहरले उ’द्दार गरेका हुन् ।
एन्जेलिकाले उ’द्धार भइसकेपछि ‘म फेरि जन्मिए, भगवानले मलाई जि’वितै रहोस् भन्ने चाहेका रहेनछन्’ भनेकी छन् । आरसीएन रेडियोसँग उनले आफ्नो कथा पनि खोलिन्। उनले २० वर्षसम्म श्रीमानले निकै दु:ख दिएको बताएकी छन् । अ’न्त्यमा उनले दिएको या त ना र दु:ख सहन नसकेर घर छोडेर हिडेको उनको भनाई छ । उनले सन् २०१८ मा घर छाडेर हिडेको बताएकी छन् ।
घर छाडेर हिडेपछि उनले ६ महिना सडकमै मागेर खाइन्। उनले आश्रयस्थलमा बास पनि पाइन्। यसरी जीवनमा ठूलो पि डा भो’गेपछि आफूलाई बाँच्ने रहर नभएको र समुद्रमा हा’म फालेको बताइन्। समुद्रमा हा’म फालेको आठ घण्टापछि उनको उ’द्धार भएको थियो।
Prevशनिबार कुन राशिका लागि कति शुभ ?
Nextनाबा’लिकालाई लो’भ्याएर धेरै पु’रुषसँग पठाउने महिला नेतृको पर्दाफास !
कोरोनाले बिगार्छ अण्डकोष, प्रजनन क्षमतामा पनि ह्रास आउने
नेपालमा आज एकैदिन थपिए थप ८३८ जना कोरोना संक्रमित
स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह